Waajibaadka Guddiga | Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka
NIEC in Video
Waajibaadka Guddiga	niec	2017-07-28T03:52:43+00:00
1. Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka si waafaqsan Qodobka 111G ee Dastuurka, wuxuu leeyahay xililka iyo awooodaha soo socda:
a) Abaabulidda, qabashada iyo kormeerka doorashoyinka heer degmo, gobol, qaran ee axsaabta siyaasadeed iyo aftida dadweyne;
b) Taniyo inta axsaabta siyaasadeed iyo deegaan doorashooyin dalka ka hirgalayaan, Guddigu wuxuu doorashooyinka deegmooyinka iyo maamul goboleedyada ku maamulayaa si waafaqsan sharciga LR 116 iyo wixii kale oo shuruucda dalka u xilsaaro;
c) Diiwaangelinta codIbixiyeyaasha iyo joogtaynta dibIuIeegidda diiwaanka codbixiyeyaasha;
d) Xadidaadda deegaanada iyo goobaha codbixineed hadba sida ugu habboon oo doorashooyinka looga fulin karo;
e) Nidaaminta iyo hubinta shuruucda axsaabta siyaasadeed, si waafaqsan sharciga diwaangelinta axsaabta iyo shuruucda kale ee dalka;
f) Fududaynta kor joogtaynta, ilaalinta iyo qiimaynta doorashooyinka;
g) Soo saarida iyo hirgelinta xeer dhaqameed hagaya musharaxiinta iyo axsaabta doorashada ka qeyb galeysa;
2. U kuurgelidda iyo ilaalinta in axsaabta ku dhaqmaan sharciyada nidaaminaya magacaabista musharixiinta axsaabta;
3. Hirgelinta WacyiIgelinta codIbixiyeyaasha;
4. Diiwaangelinta Musharixiinta doorashooyinka;
5. Maamulidda doorashada Baarlamaanka Federaalka;
6. Maamulidda qabashada Afti dadweyne;
7. Kormeeridda iyo fududaynta hawlaha doorashooyinka;
8. Xallinta khilaafaadka doorashooyinka iyadoo aan lagu xadgudbeyn doorka hay’adda Garsoorka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya;
9. Ku dhawaaqidda natiijooyinka doorashooyinka;
10. Ku dhawaaqidda muddeynta maalmaha ololaha doorashooyinka, xaddidaada muddada kama danbeysta ah ee doorashooyinka iyo waqtiyeynta abaabullidda iyo diyaarinta doorashooyinka si waafaqsan Dastuurkan iyo Sharcigan;
11. Soo saaridda xeer, habraacyo iyo qoraallo hagaya habsami u socodka doorashooyinka;
12. In uu xafiisyo ka furto degaannada dalka hadba meelaha ugu habboon oo aan looga maarmin fulinta hawlaha Guddiga iyo xilgudashadiisa;
13. In Guddigu uu qorto shaqaale lagama maarmaan u ah fulinta hawlaha doorashooyinka lana waafajiyo sharciga Shaqaalaha rayidka;
14. Guddiga wuxuu shaqo joojin ku sameyn karaa una gudbin karaa hay’adaha cadaaladda qof kasta oo ka tirsan Guddiga ama shaqaalaha Guddiga oo lagu helo fal wax u dhimaya dhexdhexaadnimada iyo cadaaladda doorashooyinka;
15. Khilaafaadka uu xaliyo Guddigu waa kama dambays aan ka ahayn dacwadaha la xiriira xaqa cod bixinta, xaqa ka qaybgalka doorashada iyo go’aanka kama dambeysta ah ee doorashada kaasoo loo qaadan karo racfaan Maxkamadda Dastuurka;
16. Dejinta nidaamka dhaqanIwanaagga musharrixiinta, axsaabta siyaasadeed iyo warbaahinta;
17. Inuu go’aan maamuleedka Guddiga ka gaaro cabashooyinka la xiriira go’aannada Guddiga, hawlwadeennada ama wakiillada Guddigu idmaday kana qaado tallabada ku haboon. Haddii go’aanka guddiga lagu qanci waayo waxaa u furan in racfaan loo qaato Maxkamadda ay khuseyso muddo 14 maalmood gudahood ah, maxkamaddu waa in ay go,aan kama dambeys ah ku gaarto sida ugu dhaqsaha badan;
18. In uu hubiyo tallaabada ku habboona ka qaado in habraaca doorashooyinka uu Guddigu fuliyey si hufan loo hirgeliyey, haddii loo baahdana uu go,aan ku gaari karo in deegaan doorasho ka dhacday dib loogu celiyo doorasho cusub iyo inuu waxIkamaIjiraan ka dhigo natiijada marka ay u sugnaato in rabitaanka codI bixiyeyaasha la musuqmaasuqay;
19. In uu ganaaxi karo ama xannibaadImaamuleed ku ridi karo ciddii ku kacda falI danbiyeed, oo aan ahayn fal jariimo, ku xadgudub sharci ama xeerInidaamiyaha Guddiga;
20. In musharraxii ku xadgudba sharcigan ama kuwa aan soo buuxin shuruudaha sharcigan ku xusan uu ka joojin karo tartanka doorashada ama dibIuIcelin karo liiska/liisaska lagu soo magacaabay;
21. In uu cayimo goobaha codIbixinta ay dadweynuhu codkooda ku dhiibanayaan;
22. In uu tilmaamo waraaqaha doorashooyinka iyo habka loo calaamadinayo;
23. In uu qeexo habka loo tirinayo codadka;
24. In uu cayimo goobaha lagu tirinayo codadka;
25. In uu go’aamiyo goobjoogayaal Madaxbannaan iyo Saxaafadda oo u kuur galaya sida doorashada u socoto;
26. Guddiga doorashadu wuxuu soo jeedin karaa dib u dhigis doorasho ee muddo cayiman isagoo sababeyn faahfaahsan u soo gudbinaya Golaha Baarlamaanka Federalka xilli ku habboon;
27. Fulinta hawl kasta oo Dastuurka iyo sharcigani u xilsaaray.
Ku Saabsan GMDQ
RUKUMU WARARKA DOORASHADA
Xuquuqda© 2017 Guddiga Madaxabannaan ee Doorashooyinka Qaranka